एमसीसीले उल्टियो राजनीति: प्रचण्डहरुलाई वाइपास गर्दै देउवा एकाएक जुटे भयङ्कर तयारीमा, बालकोटमा छायो खुसीयाली ! – GALAXY
एमसीसीले उल्टियो राजनीति: प्रचण्डहरुलाई वाइपास गर्दै देउवा एकाएक जुटे भयङ्कर तयारीमा, बालकोटमा छायो खुसीयाली !
नेकपा एसका अध्यक्ष माधवकुमार नेपालले एमसीसी संशोधनसहित पारित हुने पक्षमा रहेको बताइसकेका छन् । नेककपा एसभित्र पनि एमसीसीको विरोधी बढी देखिएका छन् । वरिष्ठ नेता झलनाथ खनाल यथास्थितिमा एमसीसी पारित गर्न नहुने पक्षमा उभिएका छन् । जनमोर्चा नेपालले एमसीसी अगाडि बढाए गठबन्धन छाड्ने चेतावनी दिइसकेका छन् । जनमोर्चा एमसीसी विरोधी गतिविधिमा सक्रिय भइसकेको छ ।